Abavelisi kunye nabaThengisi bezinto zokugcoba - Umzi mveliso weBhakhiti yeCosmetic
Umthamo omkhulu webhokisi lokugcina ibhokisi yokugcina
Isikhwama sokucoca senziwe ngezinto ezikumgangatho ophezulu wePU ye-matte, ekhululekile ukuchukumisa kwaye ineempembelelo zokungahambi kwamanzi kunye nokungahambelani kokunxiba. Ubume obujikelezayo, imibala eyahlukeneyo yokuqaqambisa, imibala, izinto zokuthambisa zemihla ngemihla, imilebe yomlomo, iimveliso zokhathalelo lolusu kunye neebhulashi okanye ezinye izinto ezincinci ezifunekayo xa useluhambeni. Ilungele ukubeka izinto zokuthambisa kunye nezinto zokugcina.
Ukugcina ibhokisi yokugcina ubucwebe
Uyilo olwahlukileyo lomntu, kusetyenziswa izixhobo ezikumgangatho ophezulu kunye ezinobuhlobo bemeko yePU, ukhetho lwangaphakathi lwe-velvet ethambileyo kunye ne-velvet, isiphelo esiphakamileyo, isithukuthezi esihle. Kukho izinto ezininzi ngaphakathi ngaphakathi, ezilungele ukugcina amakhonkco, imigexo, imilebe yomlomo, isacholo, iiwotshi, njl njl, ikuvumela ukuba uhlele kwaye ugcine izinto.
Isingxobo esitsha sokugcina izinto zokugcoba iibhegi ezahlukeneyo zemisebenzi yesigcawu sebhokisi yemveliso yokuthengisa ngokuthe ngqo
Umlungelelanisi wemisebenzi emininzi, le bhokisi yokuhambisa impahla yokuhambisa umzimba yokuhambisa yezithuthi ezininzi enomgangatho ophezulu kwaye yenziwe ngendwangu enomgangatho ophakamileyo kunye nendalo enobuhlobo be-Oxford, nto leyo inobungqina obungenakuthelekiswa nanto, obungenakubaleka, obunobungqina bokukrazula kwaye kulula ukubucoca. Ilungele ukuhamba, ukupakisha ngaphandle, ukukhwela intaba, ukuya ekhefini, ukuya kwindawo yokuqubha okanye elwandle, elunxwemeni, kwindawo yokuzivocavoca.
Inkunkuma eNtsha yeNylon yokulahla amanzi kwi-Bath
Umgangatho ophezulu: ibhegi ebalulekileyo yokuhamba yenziwa nge-nylon ekumgangatho ophezulu, ayinamanzi kwaye ihlala ixesha elide, kulula ukucoca, ukuphinda ubenakho, okusingqongileyo, ubomi benkonzo ende, ukugcinwa okugqibeleleyo kwezinto zokucoca, yindawo efanelekileyo yezingxowa zeplastiki.
Ibhegi ephathekayo yokuhambisa yezokuhombisa yokugcina i-polka dot cosmetic bag
Isingxobo sokuhombisa asiyokuba yingxowa yokuhlamba kuphela, kodwa nengxowa yokuhombisa, ibhegi yokugcina, njl. Njl. Ingxowa yokuhamba enoluhlu olubanzi lokusetyenziswa. Yenziwe ngezinto ezikumgangatho ophezulu wobume bendalo obunobuhlobo be-polyester, ubungqina bomswakama, amanzi, angazikhusela kakuhle izinto zakho, kwaye kulula kakhulu ukucoca.
Izingxobo zethu zokucoca ezingabonakaliyo zenziwe ngezinto ezikumgangatho ophezulu ze-PVC, zinokuxhathisa okuphezulu kwe-abrasion, ukumelana namanzi, ukuxhathisa okuphezulu kwezinambuzane, isikhunta, izilwanyana kunye nokubumba, ukubumba, ukubola kunye neekhemikhali ezininzi, zinokubonelela ngamava okusebenzisa ixesha elide.